Kubhururuka kweshiri nyora, ndega kana kuperekedzwa? | Kunyora
Kubhururuka kweshiri nyora, ndega kana kuperekedzwa?
Nat Cherry | | Mhuka Tattoos
ari nyora nyora kubhururuka ndiko, pamwe, imwe yemagadzirirwo anozivikanwa ayo mhuka idzi dzinoshandiswa. Dimikira uye mucherechedzo werusununguko, shiri dzinokodzera chidimbu chidiki uye chakangwara.
Zvisinei, Chii chiri nani, iyo nyora nyora kubhururuka ndega kana nezvimwe zvinhu? Kunyangwe isu tisina mhinduro yakajeka, takavaongorora kuti tiwane mhedziso shoma.
1 Shiri dzinobhururuka dzoga nyora
2 Nezvimwe zvinhu
Shiri dzinobhururuka dzoga nyora
Chekutanga pane zvese, ngatione iyo yakapusa vhezheni yerudzi urwu rwe tattoo. Pakutanga kuonana, nyora nyoni dziri kubhururuka dzoga, pasina chimwe chinhu, dzakanakira avo vanoda tattoo nyowani. Ivo vanowanzo kuve magadzirirwo mune rimwe vara, kazhinji dema, iyo silhouette yeshiri.
Nekudaro, ivo vanounza dambudziko diki: kana vakaiswa munzvimbo yakakura kwazvo, zviri nyore kuti dhizaini irasike, uye zvishoma kunze kwechimiro, nekuti iwe hauzive kuti shiri dzinobva kupi. Nekudaro, izvi zviri nyore kugadzirisa: Kana shiri dzikaiswa munzvimbo yakatetepa uye chimiro cheboka chikatorerwa mukana, tinogona kupedzisira tave nehana yakanyanyisa uye inotonhorera dhizaini ndiko kuti, semuenzaniso, muchimiro chebracelet.
Imwe sarudzo huru yemhando idzi dzekugadzira ndeyekuvaperekedza nechinhu chinovapa mamiriro. Zvimwe zvakajairika kupfuura zvimwe, uye vanogona kuzvipa zvinoreva zvinyowani. Semuenzaniso, unogona kuzvisanganisa nemakeji (kuenderera mberi uchisimbisa pfungwa yerusununguko), miti, minhenga ...
Sezvaunogona kufungidzira, kana shiri dzichifambiswa nechimwe chinhu, dzinenge dzichida dhizaini hombe, mune iro kunyange ruvara inoshandiswa Naizvozvo, isu tinowanzo tsvaga dhizaini munzvimbo dzakakura, senge kumashure, makumbo, parutivi kana pamafudzi.
Flying bird tattoos akanaka uye ane chirevo chakasimba kwazvo, handiti? Tiudze, une tattoo yakadai? Wakasarudza dhizaini neshiri dzoga here kana kuperekedzwa neimwe nguva? Rangarira kutiudza izvo zvaunoda, iwe unofanirwa kusiya komendi!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kunyora » Mhando dzematatoo » Mhuka Tattoos » Kubhururuka kweshiri nyora, ndega kana kuperekedzwa?
Diki, akangwara uye yakashongedzwa matatoo ebazi
Ndingaite sei kuchengeta nekutarisa nyora yangu?